Homeराष्ट्रिय खबरभीम उपाध्याय र ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प,क्रिने – अ,पह,रण गर्ने र गराउनेलाई छाड्ने ?
काठमाडौं । साझा पार्टीका संयोजक रवीन्द्र मिश्रले कानुन उल्लंघन गर्ने सबैलाई का,रबाही गर्नुपर्ने बताएका छन् । हालै सरकारका पूर्वसचिव भीम उपाध्याय र आफूलाई सामाजिक अभियान्ता बताउने ज्ञानेन्द्र शाही प,क्राउ र विकसित राजनीतिक घ,टनाक्रमलाई जोडेर उनले कानुन कार्यान्वयन समान रुपमा हुनु पर्ने बताएका हुन् ।
कतिपयले यसलाई अ,पहरणकै शैली भनेका छन् । तर, सांसदद्वय बस्नेत र श्रेष्ठ तथा पूर्वआइजीपी खनालले ज,बरजस्ती नगरेको प्रक्रिया दिँदै आएका छन् । उपाध्याय, शाही प,क्राउ प्रसङ्ग कोट्याउँदै संयोजक मिश्रले डा. यादवलाई काठमाडौं ल्याउने कार्यमा संलग्नमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
मुलुक कोरोनाभाइरसबाट भन्दा पनि ठूलो राजनीतिक अ,निष्ट यो मुलुकले भो,गिरहेको भन्दै संयोजक मिश्रले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘कानून उ,लंघन भए सबैलाई का,रवाही गर्नोस्। तर भीम उपाध्याय, ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प,क्रिने अनि ’अ,पहरण’ गर्न जाने र गर्न पठाउनेलाई चाहिँ छानविन नगर्ने? कोरोनाबाट भन्दा धेरै ठूलो अ,निष्ट यो देशले राजनीतिबाट भोगिरहेको छ, जसबाट हामी गु,ज्रिएको दशकौँ भयो। सचेत नभए अझ दशकौँ यसैगरी बि,त्नेछ।’
रा,जिनामा दिनुपर्छ भनेको छैन – बामदेव गौतम
cialis online without prescription how to buy cialis online uk – buy cialis online viagra